Sony က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ မျိုးဆက်သစ် PlayStation5ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ?
date_range 23 September 2017
PlayStation4ကို ၂၀၁၃ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ပွဲဦးထွက် စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Xbox One နဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ် Console က ပိုသာလဲဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ၊ စကားနိုင်လုမှုတွေကြားကနေပြီး PS4 ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ တည်ဆောက်မှုစနစ်၊ အထူးခြားဆုံး Exclusive ဂိမ်းတွေနဲ့ PlayStation အွန်လိုင်းရပ်ဝန်းကို ပိုမိုအားကောင်းကျယ်ပြန့်လာစေခဲ့ပြီး၊ Xbox Console ထက် ရောင်းအားသွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Nintendo Switch console အပေါ်မှာလည်း စိတ်မဝင်စားဘဲ၊ ဘယ်လိုမျိုးဂိမ်းပလက်ဖောင်းမှာ ဂိမ်းဆော့ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေသူတွေအတွက်ကတော့ PS4 ဟာ အသင့်တော်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
PS4 Exclusive ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ God Of War စီးရီး၊ Uncharted စီးရီးတွေအပြင် The Last Of Us, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Bloodborne, Persona 5, Horizon: Zero Dawn အစရှိတဲ့ ဂိမ်းကောင်းတွေဟာ Playstation ပလက်ဖောင်းကို တန်ဖိုးမြင့်စေပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလဆန်စွာ အားလုံးထဲက ကွဲထွက်စေခဲ့ပါတယ်။
4K Resolution တီဗီကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအဖို့ Playstation4Pro ကို ဒေါ်လာ ၄၀၀ သုံးစွဲပြီး ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ အကြည်လင်ပြတ်သားဆုံး၊ ချောမွေ့သေသပ်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဂိမ်းကစားမှုအတွေ့အကြုံကို အဆင်သင့် ခံစားနိုင်မှာပါ။ အဲဒီလိုမျိုး PS4 နဲ့ Xbox One ဘယ် console က ပိုသာသလဲဆိုတဲ့ အားပြိုင်မှုတွေဟာ အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အသစ်၊ ဗားရှင်းအသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတိုင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိကြပေမယ့်၊ ဘယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဆော့ကစားမလဲဆိုတာကတော့ Gamer တွေ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကိုယ် ရွေးချယ်ရမှာပါပဲ။
PS4 စက်တွေ ထွက်မလာခင်အချိန်မှာ PS4 Pro နဲ့ PS4 Slim ဘယ်နေ့ဘယ်လမှာ ထွက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ တိတိကျကျနဲ့ အချိန်ကိုက်ခန့်မှန်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ သုတေသီ Damian Thong က အခုလည်း Sony ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် PlayStation ဂိမ်းစက်အသစ်ဟာ ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထွက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် Playstation စက်ဟာ Silm PS4 Pro မဟုတ်သလို နဂိုစက်တွေရဲ့ ဗားရှင်းမြင့်၊ မော်ဒယ်မြင့် Console မျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲ မျိုးဆက်သစ် console တစ်ခုအနေနဲ့ Playstation5ဆိုပြီး၊ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ သူက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
Damian ဟာ ခန့်မှန်းချက်ပေးတဲ့နေရာမှာ အလွန်တော်တာလား၊ အကြားအမြင်ရနေတာလားဆိုတာ မပြောနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူ့ခန့်မှန်းချက်ထွက်ပြီး၊ မကြာသေးမီမှာပဲ Sony ကိုယ်တိုင်က Playstation5ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုခဲ့လို့ပါ။
PS5 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ကောလဟာလတွေ ရှင်းလင်းပပျောက်သွားစေဖို့အတွက် PlayStation ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Shawn Layden ကနေပြီး ဂျာမန်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Playstation5ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Damian ဟာလည်း Wall Street Journal ကို PlayStation ဂိမ်းစက်အသစ်တွေဟာ ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ဈေးကွက်ထဲ ပွဲဦးထွက်ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ပြောပြပြီး၊ မကြာခင်မှာပဲ Shawn Layden က တရားဝင်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ PS4 ဂိမ်းစက်၊ ဂိမ်းခွေတွေဟာ ရောင်းအားမကျဘဲ အောင်မြင်မှုနှုန်းကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အတွက် Sony အနေနဲ့ PS5 ထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပြောပြချက်ဟာ စောကောင်းစောနိုင်တယ်လို့တော့ တချို့က သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ PS3 စက်တွေနေရာမှာ PS4 စက်အဖြစ် အစားထိုးဝင်ရောက်လာဖို့ အချိန် ၇ နှစ်အတိုင်းအတာ ကြာမြင့်ခဲ့သလို PlayStation4စတင်ထွက်ရှိလာခဲ့တာကလည်း လေးနှစ်တာကာလလောက်သာ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးတစ်ခုသတိထားရမှာက Damian Thong ဟာ PlayStation နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းတဲ့နေရာမှာ လျစ်လျူရှုထားလို့မရတဲ့ သုတေသီတစ်ယောက်ဆိုတာပါ။ Damian ဟာ PS4 ဂိမ်းစက်တွေ ထွက်ရှိလာမယ့်အကြောင်း ကြေငြာနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်း စက်တွေထွက်လာပြီးရင် PS4 Pro နဲ့ Slim console နှစ်မျိုးနှစ်စားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး၊ သူ့ခန့်မှန်းချက်က တက်တက်စင်အောင် မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ PS5 ထွက်ရှိမယ်ဆိုတာသေချာမယ်ဆိုရင်၊ ယခုနှစ် ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့် Tokyo Game Show, ဒီဇင်ဘာလရဲ့ PlayStation Experience အစရှိတဲ့ပွဲတွေမှာ Sony အနေနဲ့ တရားဝင်အသိပေးကြေညာချက်တွေ ပြုလုပ်သွားရမှာပါ။
ဒီတော့ Damian Thong ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေဟာပဲ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်မလား? ဒါမှမဟုတ် PlayStation5ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကို ကျော်လွန်ပြီး ၂၀၁၉ ကို ကူးသွားမလားဆိုတာကတော့၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ နားစွင့်စော့င်ဆိုင်းနေကြပါဦးလို့ ဒီကနေ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
Vulture Express UK GameRevolution
Sony PlayStation PS4 Consoles Gaming Related PlayStation5Damian Thong Slim PS4 Pro